I-infographic: Indlela iNethiwekhi yeNtlalontle ebuchaphazela ngayo uBomi bethu | Martech Zone
namhlanje amaqonga eendaba ezentlalo sinendima ephambili ekufuneka siyidlalile ebomini bethu. Iibhiliyoni zabantu kwihlabathi liphela ziyazisebenzisa ukunxibelelana, ukonwaba, ukunxulumana, ukufikelela kwiindaba, ukukhangela imveliso / inkonzo, ivenkile, njl.
Ubudala bakho okanye imvelaphi yakho ayibalulekanga. Iinethiwekhi zentlalo ziya kuyichaphazela kakhulu imihla ngemihla. Unokufikelela ebantwini abanomdla ofanayo nakwakho kwaye wakhe ubuhlobo obuhlala buhlala nokuba ungaziwa.
Unokuvelana nabanye abantu abaninzi kwihlabathi liphela ngokusebenzisa i-hashtag efanayo. Nokuba ungangabonisi umfanekiso wakho wokwenyani kubo, kodwa baya kudibana nomxholo wakho.
Bonke abantu abavela kwimvelaphi eyahlukeneyo yezoqoqosho kunye neyenkcubeko basebenzisa iinethiwekhi zentlalo ngenkuthalo. Ngokwenyani, kunzima ukucinga ngosuku ngaphandle kwemithombo yeendaba.
Konke oku yayiyimpembelelo yemidiya yoluntu kubantu abathile. Abezopolitiko, oorhulumente, abanini bemithombo yeendaba ngokwesiko, iinkwenkwezi, abantu abadumileyo, kunye nabo bonke abantu abanempembelelo bayasasaza imiyalezo yabo besebenzisa ezi nethiwekhi.
Abantu abaninzi bayazithemba iindaba zosasazo lwentlalo ngaphezulu kweearhente zeendaba zikarhulumente kuba becinga ukuba abasebenzisi boluntu banyanisekile.
Akukho mbandela ubalulekileyo emhlabeni ongathethelwayo kwiindlela zentlalo. Ke iinethiwekhi ezikwi-intanethi kunye nomxholo owenziwe ngumsebenzisi Inxalenye enkulu yeendaba zemihla ngemihla ehlabathini.
Kwelinye icala, amashishini nawo asebenzisa iinkonzo zentlalo ukuthatha eli thuba lokufikelela kuluntu. Iinjongo zabo eziphambili zihlala zilwazisa uphawu, ukuvelisa okukhokelayo, ukuqhuba ukugcwala kumaphepha ewebhu, ukukhula kwentengiso, kunye nokuphucula iinkonzo zabathengi.
Nje ngeziphumo, ukuthengisa ngokusebenzisa uthungelwano lwasentlalweni iyeyona nto iphambili kubanini bamashishini abaninzi kunye nabathengisi. Maninzi amathuba emisebenzi enzelwe abathengisi, abavelisi bomxholo, abaphathi beendaba zosasazo, abayili bemizobo, njl.
Ngesiqhelo, le misebenzi ihlupheke kancinci kunalo naliphi na elinye icandelo ngexesha lokuqhambuka kwe-COVID-19. Isakhono sokwenza intengiso yemidiya yoluntu kude sikhuthaze iimveliso ukuba zinike abathengisi abakude.
Ngabantu abasebenzisa i-intanethi kunye neenethiwekhi zentlalo kunangaphambili, amathuba amatsha ahlanganisene neempawu zokuthengisa iimveliso / iinkonzo zabo.
Xa bekhangela imveliso, ama-54% abantu babhenela kumajelo asekuhlaleni kuphando lwabo. I-49% yabathengi isiseko sokuthenga kwabo kwizindululo zabaphembeleli bemithombo yeendaba.
Amashishini amancinci anokusebenzisa eli thuba ukuqhuba amaphulo akwi-Intanethi. Oku kuya kusebenza ngokufanelekileyo kwaye kungabizi mali kubo kwaye kwandise abalandeli babo kwaye komeleze umgca wabo osezantsi.
Lilonke, impembelelo yemidiya yoluntu kubomi bethu ibalulekile. Ke ngoko, iqela lethu Ezentlalo Ndigqibe kwelokuba ndishwankathele kwaye ndibonakalise eyona datha ibaluleke kakhulu malunga noku njenge-infographic.
Nokuba ungumsebenzisi oqhelekileyo okanye ungumthengisi, sicebisa ukuba uyiqwalasele le datha ukuze ukwazi ukubaluleka konxibelelwano lwasentlalweni.
tags: isizukulwana esikhokelayozifundoimpembelelo yokuthengakwimidiya yoluntuamaqonga eendaba ezentlaloamanani eendaba ezentlaloimpembelelo yenethiwekhi yoluntumanani ezonxibelelwanoyezentlaloihlumeloTikTokUmxholo oveliswe ngumsebenzisi